२०१८ को राशिफल : जान्नुहोस् यो वर्ष तपाईको भविष्य कस्तो हुनेछ? - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
२०१८ को राशिफल : जान्नुहोस् यो वर्ष तपाईको भविष्य कस्तो हुनेछ?
1 January, 2018 3:47 pm
काठमाडौँ, पुस १७, २०७४ : नयाँ वर्ष हरेक चोटी केही नयाँ आशा, केहि नयाँ सपना र उमङ्ग लिएर आउदछ । २०१८ मा तपाईको लागि विशेष कुरा के हो ? पात्रो विशेषज्ञबाट २०१८ को वार्षिक भविष्यफल थाहा पाउनुहोस्।
मेष: यस वर्ष तपाईको जीवन सन्तुलन हुनेछ। यदि तपाई आफैलाई शुद्ध राख्नुहुन्छ भने तपाईले वाह्य सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो मद्दत सल्लाह वा उपचारको रूपमा उपलब्ध हुन्छ । निर्णय लिनु वा विवाद समाधान गर्दा तस्वीरको दुवै पक्षहरूमा ध्यान दिनुहोस्।
दैनिक भत्तामा सम्झौता सफल हुनेछ र सामाजिक विवादमा सुधार आउने छ। सम्बन्धमा सुधार गर्नका लागि र खुल्ला रुपमा कुरा गर्नुहोस्। रचनात्मक कार्य र परियोजनाहरूको लागि नयाँ तरीकाबाट प्रयास गर्नुहोस्। शान्त रहने प्रयास गर्नुहोस्।
वृष: यो वर्ष तपाई निकै नै उत्साहित हुनु हुनेछ। यो तपाईको दिमाग, मन, विश्वास वा व्यवहारमा देखा पर्छ। यी सबै तपाइको व्यवहारमा अचानक आउने छन् वा देखा पर्नेछन्। लामो समयदेखिको क्रोधले यो समयमा विस्फोटको रूप लिनेछ।
पात्रोले घर परीवर्तन हुने पनि संकेत गर्दछ। कार्यक्षेत्रमा अप्रत्यारीलो परीवर्तनहरू हुनेछ। एकै समयमा ठुलो काम बन्नेछ।
मिथुन: यो पात्रोले एक प्रकारको संरचनाको सङ्केत गरीरहेको छ, जसको कारणले तपाईलाई शक्ति मिल्नेछ। भौतिक उपलब्धिको संकेत, जसको उत्तम प्रभाव हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा बडुवा वा निर्देशक बन्ने योग छ। ठूलो संस्थान, कम्पनी सम्हाल्ने प्रस्ताव आउने छ। पिता समान कुनै व्यक्ति सहायक हुनेछ।
विज्ञान, राजनीति, कम्प्यूटर, सेना दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको लागि शुभ समय हुनेछ। व्यवसायमा सफलता र धन लाभको योग रहेको छ । आफ्नो सिर र शरीरको चोटिलो अङ्गहरुको ध्यान राख्नुहोस। जीवनसाथीसँग हावी हुनबाट बच्नुहोस् ।
कर्कट: लामो समयको मूर्खतापूर्ण योजना हावामा जानेछ। पात्रोले तपाईलाई उद्देश्य प्राप्तिको सङ्केत देखाई रहेको छ। कुनै कार्यालयमा विभाग व्यवस्थापनको लागि प्रस्ताव आउने छ। अध्यापनको कार्यसँग जोडिनुहुनेछ।
भाषा, लेखन, वाद-विवाद वा साइकोथेरापीमा सम्मेलन हुनुहुनेछ । साथै नर्वस प्रणाली, फोक्सो र आफ्नो पाँच इन्द्रियहरुको ध्यान राख्नुहोस्। आफ्नो भावनामा ध्यान दिनुहोस। अधिक विश्लेषण गर्ने बानी छोड्नुहोस्। नयाँ सम्बन्धहरुको सुरुवात हुने समय रहेको छ ।
सिंह: यो वर्ष तपाईको इच्छा पूरा हुनेछ। स्थिरता र विकासको समय छ। नयाँ साथीहरू बन्नेछन् र पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछ। तपाईको मान-सम्‍मान बढेर जानेछ। ध्यान राख्नुहोस् सम्बन्धलाई हामीले जुन तरीकाले पोषण दिन्छौ त्यसरी नै हामीले फिर्ता पाउँछौ।
त्यसैले, सम्बन्धको बीचमा समन्वय बनाई राख्नुहोस्। यस्तो सम्बन्धको अर्थ पत्ता लगाउँदा कहिलेकाहीँ सबै चिज दीएर पनि केही चीज मिल्दैन। यस समयमा तपाईलाई नयाँ उद्देश्य, नयाँ सपना, नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्न आवश्यक छ।
कन्या: यस वर्ष केही दानको कामको प्रतिज्ञा आफैले गर्नु पर्नेछ। विशेष गरी कमजोर वर्गका व्यक्तिहरुलाई सक्षम बनाउने प्रयास गर्नु पर्दछ। सुन्दर चीजहरू किन्न मन लाग्नेछ। कडा मेहनतको क्रममा आराम गर्नुहोस् र आफुलाई स्वस्थ राख्ने प्रयास गर्नुहोस्।
सामाजिक भीडमा कोही परीवारका सदस्य वा मित्रले प्रेरणाको काम गर्नेछन्।
तुला: यो वर्ष तपाईका लागि धेरै शुभ समाचार लिएर आउने छ। आर्थिक र सुखका स्रोतहरु अत्याधिक मात्रामा मिल्नेछन् तपाईको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुनेछन्।
यदि तपाइँ एक कलाकार हुनुहुन्छ भने रङ्ग, लेखन र मूर्तिकलामा आफ्नो ऊर्जा प्रयोग गर्नुहोस्। घर सुन्दर बनाउनको लागी प्रयोग हुनेछ। कुनै उज्ज्वल र बलियो महिलासँग भेट हुन सक्छ। प्रेममा ध्यान दिनुहोस्।
वृश्चिक: कुनै पनि कामलाई लिएर जिज्ञासा र उत्सुकता हुनेछ। कार्य क्षेत्रमा अस्थिरता हुनेछ। कहिलेकाहीँ दिन र रात काम गर्नुपर्छ भने कहिले काही खाली हुनेछ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो ऊर्जालाई सम्हाल्न आवश्यक छ।
उदासीका साथ कुनै पनि समयमा जालमा फस्ने डर पनि हुन सक्नेछ । आफ्नो डरलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। आफैलाई निरन्तर प्रेरणा दिनुहोस् । आफ्नो योजना कसैको साथमा नबनाउनुहोस्, अन्यथा यो परियोजना हातबाट चिप्लिने छ।
धनु: तपाईको यो वर्ष खुशी र जीवन-शक्तिका साथ सुरु हुनेछ। यो वर्ष तपाईको काम र सम्बन्ध दुवैको आनन्द लिने समय रहेको छ । ऊर्जा र आत्मविश्वासको स्तर बलियो हुनेछ। स्वास्थ्यको चमक तपाईको अनुहारमा हुनेछ ।
तपाई आफ्नो सपनाहरू पूरा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। ठूलो योजना बनाउनका लागि उत्तम समय रहेको छ। नयाँ व्यवसाय वा उत्कृष्ट बिदाको लक्षण देखिन्छ। बच्चाहरुसँग सम्बन्धित कुनै शुभ समाचार मिल्नेछ।
मकर: यो वर्ष कार्यक्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। कडा काम र योगदानको सङ्केत देखिन्छ। कार्य संतोषजनक रुपमा पूर्ण हुनेछ। उत्तम फल प्राप्तीका लागि आफैले निरन्तर चुनौती र प्रेरणा दिनुपर्छ ।
विभिन्न व्यक्तिको ज्ञान र गुणहरूको संयुक्त प्रयासबाट एक उल्लेखनीय सफलता मिल्नेछ।
कुम्भ: यो वर्ष पैसामा मुख्य ध्यान जानेछ। विगतमा जुन चीजहरूलाई तिरस्कार गरिएको थियो ति चिजको आवश्यकता बढ्ने छ । भावनात्मक रुपमा चेतावनी पनि छ। मित्रता वा प्रेमलाई किन्ने प्रयास नगर्नुहोस् ।
तपाई वा तपाईको जीवनसँग जोडिएको कुनै पनि दोस्रो व्यक्तिले धनबाट अरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्नेछ। आर्थिक सुरक्षाको लागि एक जालमा फस्नबाट बच्नुहोस्। तपाईको आवेग र उत्तेजित गर्ने यौन इच्छाहरुलाई माया नसम्झिनुहोस्।
मीन: यो वर्ष मिन राशि भएका व्यक्तिमा प्रेम, रोमान्स, यी सबैको आध्यात्मिक र शारीरिक सम्बन्धको प्रभुत्व रहनेछ। यस समयमा निजी सम्बन्धको हावी रहनेछ । कार्ड सोलमेटको खोजी पूरा गर्ने संकेत दिइन्छ ।
एक अर्काको मन पढ्न सक्षम हुनेछ। पुरानो सम्बन्धमा चलिरहनुस या जोखिम लिएर केहि नयाँ कामको सुरुवात गर्नुहोस । सुरक्षाको लागि आफैलाई नाबेच्नुस। यो वर्ष तपाईलाई सहि बाटोमा फर्कन मौका पाउँदछ ।